Cold ဆိုသော စကားလုံးပါဝင်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
Cold ဆိုသော စကားလုံးပါဝင်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုန်းများ
Posted by Betty on January 9, 2015 at 11:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အခုအချိန်အခါ ရာသီဥတုက အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းရာသီကို ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ အခြားရာသီလိုမျိုး အိုက်စပ်၊ စိုစွတ်တာတွေ မရှိတော့ဘဲ ခြောက်သွေ့ အေးချမ်းလှသမို့ ဆောင်းတွင်းကို မကြိုက်တဲ့သူတော့ မရှိလောက်ပါဘူးနော်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့လို အပူပိုင်းဒေသက လူတွေအတွက် နှစ်ချိုက်စရာ ရာသီဥတု ဖြစ်ပေမဲ့လည်း အအေးပိုင်းဒေသက လူတွေကျတော့လည်း ထူထပ်တဲ့ နှင်းတွေအောက်မှာ အေးခဲလှတဲ့ ဆောင်းရာသီကို အံ့ကြိတ်ကာ ဖြတ်သန်းနေကြပြီး နေရောင်ပွင့်ပြီး သစ်ပင်တွေ စိမ်းစို လှပပြီး ပန်းတွေဝေမယ့် နွေရာသီကို စောင့်မျှော်နေကြမှာပါဘဲ။
ဒါကြောင့်လားမသိ အင်္ဂလိပ်စကား ပေါ်ပေါက်ရာ အအေးပိုင်းဒေသမှာတော့ အေးစက်ခြင်းကို negative အနေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ အေးတဲ့ရာသီဥတုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကို သက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုဘဲ။ ဒါကြောင့် cold ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ expression အများကြီး ရှိတာပေါ့။ Cold ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အတွင်း၊ အပြင်က အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပြောတဲ့ negative စကားလုံးအချို့ကို လေ့လာရအောင်။
ရာစုပေါင်းများစွာကတည်းက blood ဆိုတဲ့ သွေးကို emotion ခေါ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဆက်နွယ် တင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဘာခံစားမှု၊ ဘာကြင်နာမှုမှ မရှိတဲ့လူတွေကို cold blooded ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
“Cold blooded people act in cruel ways. They may do brutal things to others, and not by accident.” သူတို့က ရက်စက်ရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်တဲ့။
ရုပ်ရှင်တွေမှာရော ရုပ်သံ၊ အင်တာနက် သတင်းတွေမှာပါ လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ဘာမှမဟုတ်သလိုဘဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တာတွေ ကြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်သူတွေကို cold blooded killers လို့ ခေါ်ပါတယ်။
“ခြေဖျား၊ လက်ဖျား တွေတောင် အေးတယ်” ဆိုတဲ့ Cold နဲ့ဆိုင်တဲ့ မြန်မာစကားလည်း ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ ခြေဖျားတွေအေးတယ် cold feet လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားကတော့ ကြောက်လန့်ခြင်းကို ဖေါ်ပြတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာ to get cold feet လို့ ပြောရင် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ (ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အရာအပေါ်) တွေးပြီး ကြောက်လန့်နေမိတယ် ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အရေးပါတဲ့ ရာထူးတစ်ခုကို လက်ခံလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ ရာထူးရဲ့ တာဝန်တွေကလည်း ကြီးမားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေအရ အဲ့ဒီရာထူးမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံး ဖိအားဒါဏ်တွေ မခံနိုင်လို့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မကြာခဏ အလုပ် ထွက်သွားကြတယ်ဆိုတာဘဲ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ရပ် မှန်ရဲ့လားဆိုပြီး ချွေးစေး (cold sweat) တော့ ပြန်မိမှာ အမှန်ပါဘဲ။
You are likely to get cold feet about being the General Manager of the organization when you understand the situation.
Cold ကို shoulder နဲ့ ယှဉ်တွဲလိုက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို စိမ်းကားတယ်၊ စကားမပြောဘဲ ခပ်ခွာခွာ နေတယ်ဆိုရင် give someone the cold shoulder လို့ ပြောတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ‘ကျောခိုင်းတယ’် ဆိုပြီး ကျောကုန်းနဲ့ တင်စားပြီး ပြောပါတယ်။
I gave heracold shoulder because she lied about me to others.
နောက်တစ်ခုက ‘cold fish’ ဆိုတဲ့ ငါးနဲ့ လုံးဝ မဆိုင်တဲ့ စကားပါ။ cold fish ဆိုတာ လူကို ပြောတာဖြစ်ပြီး လုံးဝ မချစ်တတ်၊ မကြင်နာတတ်တဲ့ အသည်းနှစ်လုံး မရှိတဲ့သူကို ခေါ်တာပါ။
A cold fish does not offer much of himself to anyone.
Cold fish ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ cold-hearted ဖြစ်တဲ့ သူတွေချည်းပါဘဲ။ Cold-hearted ဖြစ်တဲ့သူတွေက မသနားတတ်တဲ့ သူတွေပေါ့။ Cold-hearted ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသဲကွဲ သီချင်းတွေမှာ အများဆုံး ကြားကြရမှာ အသေအချာပါဘဲ။
နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ out in the cold ဆိုတဲ့ idiom ပါ။ သူများတွေရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ့်ကျတော့ ဘာမှ မရဘူးလို့ ပြောတာပါ။
Everybody but John gotapay raise, so he was left out in the cold.
နွေးထွေးနေတဲ့ အခန်းထဲကနေ အေးစက်နေတဲ့ ပြင်ပကို ဖယ်ထုပ်ခံထားရတော့ ဘယ်တရားမလဲနော်။
အခုအခြိနျအခါ ရာသီဥတုက အေးခမျြးတဲ့ ဆောငျးရာသီကို ရောကျလာပွနျပါပွီ။ အခွားရာသီလိုမြိုး အိုကျစပျ၊ စိုစှတျတာတှေ မရှိတော့ဘဲ ခွောကျသှအေ့ေးခမျြးလှသမို့ ဆောငျးတှငျးကို မကွိုကျတဲ့သူတော့ မရှိလောကျပါဘူးနျော။ ဒါကလညျး ကြှနျတျောတို့လို အပူပိုငျးဒသေက လူတှအေတှကျ နှဈခြိုကျစရာ ရာသီဥတု ဖွဈပမေဲ့လညျး အအေးပိုငျးဒသေက လူတှကေတြော့လညျး ထူထပျတဲ့ နှငျးတှအေောကျမှာ အေးခဲလှတဲ့ ဆောငျးရာသီကို အံ့ကွိတျကာ ဖွတျသနျးနကွေပွီး နရေောငျပှငျ့ပွီး သဈပငျတှေ စိမျးစို လှပပွီး ပနျးတှဝေမေယျ့ နှရောသီကို စောငျ့မြှျောနကွေမှာပါဘဲ။
ဒါကွောငျ့လားမသိ အင်ျဂလိပျစကား ပျေါပေါကျရာ အအေးပိုငျးဒသေမှာတော့ အေးစကျခွငျးကို negative အနနေဲ့ သုံးကွပါတယျ။ အေးတဲ့ရာသီဥတုက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စိတျကို သကျရောကျမှု ရှိတယျဆိုဘဲ။ ဒါကွောငျ့ cold ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ expression အမြားကွီး ရှိတာပေါ့။ Cold ကို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခန်ဒာကိုယျ အတှငျး၊ အပွငျက အစိတျအပိုငျးတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး ပွောတဲ့ negative စကားလုံးအခြို့ကို လလေ့ာရအောငျ။
ရာစုပေါငျးမြားစှာကတညျးက blood ဆိုတဲ့ သှေးကို emotion ချေါတဲ့ စိတျခံစားမှုနဲ့ ဆကျနှယျ တငျစားခဲ့ပါတယျ။ ဘာခံစားမှု၊ ဘာကွငျနာမှုမှ မရှိတဲ့လူတှကေို cold blooded ဖွဈတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
“Cold blooded people act in cruel ways. They may do brutal things to others, and not by accident.” သူတို့က ရကျစကျရတာကို နှဈသကျကွတယျတဲ့။
ရုပျရှငျတှမှောရော ရုပျသံ၊ အငျတာနကျ သတငျးတှမှောပါ လူ့အသကျတဈခြောငျးကို ဘာမှမဟုတျသလိုဘဲ သှေးအေးအေးနဲ့ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျတာတှေ ကွားရပါတယျ။ အဲ့ဒီလို လုပျသူတှကေို cold blooded killers လို့ ချေါပါတယျ။
“ခွဖြေား၊ လကျဖြား တှတေောငျ အေးတယျ” ဆိုတဲ့ Cold နဲ့ဆိုငျတဲ့ မွနျမာစကားလညျး ရှိပါတယျ။ အင်ျဂလိပျမှာတော့ ခွဖြေားတှအေေးတယျ cold feet လို့ ပွောပါတယျ။ အဲ့ဒီစကားကတော့ ကွောကျလနျ့ခွငျးကို ဖျေါပွတဲ့အခါ သုံးပါတယျ။ အင်ျဂလိပျမှာ to get cold feet လို့ ပွောရငျ တဈခုခုလုပျဖို့ (ဆုံးဖွတျထားတဲ့ အရာအပျေါ) တှေးပွီး ကွောကျလနျ့နမေိတယျ ဆိုပါတယျ။ ဥပမာ ကိုယျက အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ အရေးပါတဲ့ ရာထူးတဈခုကို လကျခံလိုကျတယျ။ အဲ့ဒီ ရာထူးရဲ့ တာဝနျတှကေလညျး ကွီးမားပါတယျ။ ပွီးတော့ ကွားရတဲ့ သတငျးတှအေရ အဲ့ဒီရာထူးမှာ လုပျခဲ့တဲ့ သူတှအေားလုံး ဖိအားဒါဏျတှေ မခံနိုငျလို့ တဈယောကျပွီးတဈယောကျ မကွာခဏ အလုပျ ထှကျသှားကွတယျဆိုတာဘဲ။ ဒါဆိုရငျ ကိုယျ့လုပျရပျ မှနျရဲ့လားဆိုပွီး ခြှေးစေး (cold sweat) တော့ ပွနျမိမှာ အမှနျပါဘဲ။
Cold ကို shoulder နဲ့ ယှဉျတှဲလိုကျရငျ ဘာဖွဈလာမလဲ။ တဈယောကျယောကျကို စိမျးကားတယျ၊ စကားမပွောဘဲ ခပျခှာခှာ နတေယျဆိုရငျ give someone the cold shoulder လို့ ပွောတယျ။ မွနျမာမှာတော့ ‘ကြောခိုငျးတယ’ျ ဆိုပွီး ကြောကုနျးနဲ့ တငျစားပွီး ပွောပါတယျ။
နောကျတဈခုက ‘cold fish’ ဆိုတဲ့ ငါးနဲ့ လုံးဝ မဆိုငျတဲ့ စကားပါ။ cold fish ဆိုတာ လူကို ပွောတာဖွဈပွီး လုံးဝ မခဈြတတျ၊ မကွငျနာတတျတဲ့ အသညျးနှဈလုံး မရှိတဲ့သူကို ချေါတာပါ။
Cold fish ဆိုတဲ့ သူတှဟော cold-hearted ဖွဈတဲ့ သူတှခေညျြးပါဘဲ။ Cold-hearted ဖွဈတဲ့သူတှကေ မသနားတတျတဲ့ သူတှပေေါ့။ Cold-hearted ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသဲကှဲ သီခငျြးတှမှော အမြားဆုံး ကွားကွရမှာ အသအေခြာပါဘဲ။
နောကျဆုံး တဈခုကတော့ out in the cold ဆိုတဲ့ idiom ပါ။ သူမြားတှရေတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ကိုယျ့ကတြော့ ဘာမှ မရဘူးလို့ ပွောတာပါ။
နှေးထှေးနတေဲ့ အခနျးထဲကနေ အေးစကျနတေဲ့ ပွငျပကို ဖယျထုပျခံထားရတော့ ဘယျတရားမလဲနျော။
Permalink Reply by loisy on January 11, 2015 at 23:35
Permalink Reply by Shein Min Htet on January 12, 2015 at 16:29
Permalink Reply by Theingi on March 6, 2015 at 22:29
Permalink Reply by fawyas uddin on June 3, 2015 at 19:33
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 9:10
Permalink Reply by Hnin Htet Htet Hlaing on September 30, 2015 at 18:24
I like idioms very much plz send me more idioms english